အသက် (၄၀) ဝန်းကျင်မမတွေ ဖက်ရှင်ကျကျလန်းနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း (၅) သွယ် - For her Myanmar
အသက် (၄၀) မှ ဘဝစတာတဲ့။ ဒါ Stella မေမေပြောနေကျစကားပေါ့။ Stella ကတော့ အဲ့စကားကို သိပ်မှန်တယ်လို့ထင်တယ်။ အသက် (၄၀) အရွယ်ဟာ သားသမီးတွေလည်း အတောင်စုံသလောက်ရှိပြီ။ ဘဝရဲ့အနိမ့်အမြင့်အတက်အကျတွေကိုလည်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးပြီ။ ဒီအရွယ်မှာမှ လှလှပပ တက်ကြွကြွမနေရင် ဘယ်အချိန်သွားနေမလဲ ? Age is justanumber ပါ။ ဆိုတော့ အသက် (၄၀) ကျော်မမတွေအတွက် ကလက်တက်တက်မဖြစ်စေရဘဲ ဘယ်လိုဖက်ရှင်ကျကျလန်းလို့ရမလဲဆိုတာ Stella နဲ့တူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင် …
ဒီအရွယ်မှာ ဖိနပ်ကောင်းကောင်း အိတ်ကောင်းကောင်းက သိပ်ကို အရေးပါပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ဝတ်ကောင်းစားလှဝတ်ထားပါစေ ဖိနပ်နဲ့အိတ်က ဂွမ်းနေရင်အလကားပဲလေ။ ဒေါ်လာထောင်ချီတဲ့ Hermes Birkin အိတ်တွေ၊ ဖိနပ်တွေ ဝယ်ကိုဝယ်ရမယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်ပေမဲ့ ဘရန်းဒ်ကောင်းကောင်း ကွာလတီကောင်းကောင်း အိတ်လေး၊ ဖိနပ်လေး ပိုင်ဆိုင်ထားတာက ပွဲလယ်တင့်စေပါတယ်။
(၂) ဆိုင်မှာချိတ်ပြထားတာ လှတိုင်းမဝယ်လိုက်ပါနဲ့။
ချိတ်ပြထားတာလှနေပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်ဝတ်ကြည့်လိုက်ရင် လှချင်မှလှတော့တာပါ။ ဒါကြောင့် ရမ်းသန်းမဝယ်ပါနဲ့။ အစမ်းဝတ်ကြည့်ပါ။ စိတ်ရှည်ပြီး အချိန်ပေးရပေမဲ့ ကိုယ်ဝယ်သင့်တဲ့ အဝတ်အစားမျိုးလားဆိုတာ သိရဖို့အတွက် ဒါကတစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းပါ။
အသက် (၄၀) အရွယ်မှာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်က ဝတ်ခဲ့တဲ့ မီနီစကတ်တွေ ဝတ်မယ့်အစား အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့်နဲ့ လန်းနေစေမယ့် အဝတ်အစားတွေကို ရွေးချယ်ဝတ်သင့်ပါတယ်။ ကုတ်အင်္ကျီ၊ ပုံကျကျ style pants တစ်ထည်နဲ့ အနက်ရောင် ဂါဝန်တစ်ထည်ကတော့ မရှိမဖြစ်ပါနော်။
Related article >>> မိတ်ကပ်လိမ်းဖို့အတွက် အသက်ကြီးတယ်ဆိုတာ လုံးဝ (လုံးဝ) မရှိပါဘူး။
အသက် (၄၀) အရွယ်မှာ ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက် ဖန်စီပစ္စည်းတွေထက် ကျောက်မျက်ရတနာတွေ စီခြယ်ထားတဲ့ လက်ဝတ်လက်စားတွေက ပိုသင့်တော်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တုန်းကနဲ့ ယှဉ်ရင် ဝင်ငွေလည်း အထိုက်အလျောက်ရှိနေပြီမို့ လက်ဝတ်ရတနာကို အဓိကထား ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ နာရီကောင်းကောင်းတစ်လုံးကလည်း ယောင်းရဲ့ပုံရိပ်ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ မြှင့်တင်ပေးနေတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းကို ချစ်ပါ။ ကျန်းမာအောင် လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ပါ။ Skin care များများလုပ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်ပါ။ ဘယ်သွားသွား ဘာလုပ်လုပ် အမြဲတမ်းယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါစေ။ ဒါဆိုရင် ပြီးပြည့်စုံပြီး ကျက်သရေရှိတဲ့ ပုံရိပ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ။
Related article >>> ၂၀၁၉ မိုးရာသီနဲ့အတူ ရေပန်းစားလာဦးမယ့် အရောင်ကာလာဆန်း (၄) မျိုး
ကဲ … ဒီလောက်ဆိုရင် ယောင်းလည်း အသက် (၄၀) ကျော်မမတစ်ယောက်အနေနဲ့ အလန်းဆုံးဘယ်လိုဝတ်စားရမလဲဆိုတာ သိလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်နော်.. ကိုယ့်အသိ၊ ဆွေမျိုးထဲက အသက် (၄၀)ကျော် မမတွေကိုလည်း မန်းရှင်းခေါ်လိုက်ပါဦးလို့…
အသက်နဲ့မလိုက်အောင် နုပျိုနေဖို့ အဆင်သင့်ပဲလား ?
အသကျ (၄၀) ကြျောတှေ မလနျးရဘူးလို့ ဘယျသူပွောလဲ ?
အသကျ (၄၀) မှ ဘဝစတာတဲ့။ ဒါ Stella မမေပွေောနကေစြကားပေါ့။ Stella ကတော့ အဲ့စကားကို သိပျမှနျတယျလို့ထငျတယျ။ အသကျ (၄၀) အရှယျဟာ သားသမီးတှလေညျး အတောငျစုံသလောကျရှိပွီ။ ဘဝရဲ့အနိမျ့အမွငျ့အတကျအကတြှကေိုလညျး ကွုံတှခေဲ့ရပွီးပွီ။ ဒီအရှယျမှာမှ လှလှပပ တကျကွှကွှမနရေငျ ဘယျအခြိနျသှားနမေလဲ ? Age is justanumber ပါ။ ဆိုတော့ အသကျ (၄၀) ကြျောမမတှအေတှကျ ကလကျတကျတကျမဖွဈစရေဘဲ ဘယျလိုဖကျရှငျကကြလြနျးလို့ရမလဲဆိုတာ Stella နဲ့တူတူကွညျ့လိုကျကွရအောငျ …
ဒီအရှယျမှာ ဖိနပျကောငျးကောငျး အိတျကောငျးကောငျးက သိပျကို အရေးပါပါတယျ။ ဘယျလောကျပဲ ဝတျကောငျးစားလှဝတျထားပါစေ ဖိနပျနဲ့အိတျက ဂှမျးနရေငျအလကားပဲလေ။ ဒျေါလာထောငျခြီတဲ့ Hermes Birkin အိတျတှေ၊ ဖိနပျတှေ ဝယျကိုဝယျရမယျလို့ ပွောတာမဟုတျပမေဲ့ ဘရနျးဒျကောငျးကောငျး ကှာလတီကောငျးကောငျး အိတျလေး၊ ဖိနပျလေး ပိုငျဆိုငျထားတာက ပှဲလယျတငျ့စပေါတယျ။
(၂) ဆိုငျမှာခြိတျပွထားတာ လှတိုငျးမဝယျလိုကျပါနဲ့။
ခြိတျပွထားတာလှနပေမေဲ့ ကိုယျတိုငျဝတျကွညျ့လိုကျရငျ လှခငျြမှလှတော့တာပါ။ ဒါကွောငျ့ ရမျးသနျးမဝယျပါနဲ့။ အစမျးဝတျကွညျ့ပါ။ စိတျရှညျပွီး အခြိနျပေးရပမေဲ့ ကိုယျဝယျသငျ့တဲ့ အဝတျအစားမြိုးလားဆိုတာ သိရဖို့အတှကျ ဒါကတဈခုတညျးသော နညျးလမျးပါ။
အသကျ (၄၀) အရှယျမှာ ဆယျကြျောသကျအရှယျက ဝတျခဲ့တဲ့ မီနီစကတျတှေ ဝတျမယျ့အစား အဆငျ့အတနျးမွငျ့မွငျ့နဲ့ လနျးနစေမေယျ့ အဝတျအစားတှကေို ရှေးခယျြဝတျသငျ့ပါတယျ။ ကုတျအင်ျကြီ၊ ပုံကကြ style pants တဈထညျနဲ့ အနကျရောငျ ဂါဝနျတဈထညျကတော့ မရှိမဖွဈပါနျော။
Related article >>> မိတျကပျလိမျးဖို့အတှကျ အသကျကွီးတယျဆိုတာ လုံးဝ (လုံးဝ) မရှိပါဘူး။
အသကျ (၄၀) အရှယျမှာ ရှုပျရှုပျယှကျယှကျ ဖနျစီပစ်စညျးတှထေကျ ကြောကျမကျြရတနာတှေ စီခွယျထားတဲ့ လကျဝတျလကျစားတှကေ ပိုသငျ့တျောပါတယျ။ ဆယျကြျောသကျတုနျးကနဲ့ ယှဉျရငျ ဝငျငှလေညျး အထိုကျအလြောကျရှိနပွေီမို့ လကျဝတျရတနာကို အဓိကထား ဝတျဆငျသငျ့ပါတယျ။ နာရီကောငျးကောငျးတဈလုံးကလညျး ယောငျးရဲ့ပုံရိပျကို တဈဖကျတဈလမျးကနေ မွှငျ့တငျပေးနတေယျဆိုတာ မမပေ့ါနဲ့။
အမြိုးသမီးတဈယောကျအနနေဲ့ ကိုယျ့ခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးကို ခဈြပါ။ ကနျြးမာအောငျ လကေ့ငျြ့ခနျးမှနျမှနျလုပျပါ။ Skin care မြားမြားလုပျပါ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျခဈြပါ။ ဘယျသှားသှား ဘာလုပျလုပျ အမွဲတမျးယုံကွညျမှုအပွညျ့ရှိတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျဖွဈနပေါစေ။ ဒါဆိုရငျ ပွီးပွညျ့စုံပွီး ကကျြသရရှေိတဲ့ ပုံရိပျကို ပိုငျဆိုငျနိုငျပါပွီ။
Related article >>> ၂၀၁၉ မိုးရာသီနဲ့အတူ ရပေနျးစားလာဦးမယျ့ အရောငျကာလာဆနျး (၄) မြိုး
ကဲ … ဒီလောကျဆိုရငျ ယောငျးလညျး အသကျ (၄၀) ကြျောမမတဈယောကျအနနေဲ့ အလနျးဆုံးဘယျလိုဝတျစားရမလဲဆိုတာ သိလောကျပွီ ထငျပါတယျနျော.. ကိုယျ့အသိ၊ ဆှမြေိုးထဲက အသကျ (၄၀)ကြျော မမတှကေိုလညျး မနျးရှငျးချေါလိုကျပါဦးလို့…
အသကျနဲ့မလိုကျအောငျ နုပြိုနဖေို့ အဆငျသငျ့ပဲလား ?
Tags: 40s, closet, clothing, Fashion, Style, styling, tips, what to wear